विश्व – Page 462 – Etajakhabar
उत्तर कोरियाद्वारा ठुलो शक्तिको नयाँ रकेट मेसिनको परीक्षण
दक्षिण कोरिया, ४ असोज । उत्तर कोरियाले ठुलो शक्तिको रकेट मेसिन सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको जनाएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाको पूर्वीसमुद्रतर्फ लक्षित गरेर परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाको आधिकारीक सञ्चार माध्यमले जनाएको छ । उत्तर कोरिया सरकारद्वारा सञ्चालित समाचार समिति केसीएनएले लेखेको छ, “पूर्वी अमेरिकातर्फको दूरी झन्डै १२ हजार किलोमिटर छ, त्यसैले उत्तर कोरियाले आफ्नो क्षमता देखाउदै छ ।” स्याट...
चीनमा निलो भेडा र हिउँचितुवाको तस्करी गर्नेलाई पाँच बर्ष जेल !
चीन, ४ असोज । वन्यजन्तुको चोरी शिकारीको अभियोगमा चीनको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने गाँसु प्रोभिन्सको स्थानीय अदालतले पाँच जनालाई मङ्गलबार दोषी ठहर गर्दै सातदेखि नौ वर्षसम्म जेल सजाय सुनाएको छ । स्थानीय क्विलीन काउन्टी अदालतले ती पाँच जना सन् २०१४ मा तीन ओटा हिउँ चितुवाको बच्चा, एउटा हिउँ चितुवा, दुई ओटा निलो भेँडा लगायतका वन्यजन्तु मार्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको जनाएको छ । हिउँ चितुवा पहिलो व...
चीनका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रसङ्घका महासचिवबीच जलवायु परिवर्तनका बारेमा छलफल
अमेरिका, ४ असोज । चीनका प्रधानमन्त्री ली केक्याङले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान की मुनसँग विकास र जलवायु परिवर्तनका बारेमा छलफल गर्नु भएको छ । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री लीले दुवै विषयमा काम गर्न चीनले राष्ट्रसङ्घलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ । “चीन जहिले पनि राष्ट्रसङ्घका लागि सक्रिय सहयोगी राष्ट्र हो र राष्ट्रसङ्घको नियम तथा सिद्धान्तको स्थायी प्रतिरक्षक पनि हो,...
बस पोखरीमा खस्दा बेपत्ता भएका २० जनाको खोजीकार्य जारी
भारत, ४ असोज । भारतीय पूर्वी राज्य विहारमा करिब ६५ जना यात्रारत एक बस पोखरीमा खस्दा बेपत्ता भएका २० जना बेपत्ताको खोजीकार्यलाई जारी राखीएको छ । विहारको मधुवनी जिल्लाको बासैथामा गुडिरहेको बसले नियन्त्रण गुमाएपछि पोखरीभित्र खस्न पुगेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले स्थानीयको सहयोगमा १० जनाको शव पोखरीबाट बाहिर निकालेको छ भने अझै २० जना पोखरीभित्र रहेको हुनसक्ने बताइएको छ । विहार राज्यका मुख...
डुङ्गा दुर्घटनामा मृतकमध्ये २७ को शव भेटियो, दुई जना अझै बेपत्ता
बैंकक (थाइल्यान्ड), ४ असोज । थाइल्यान्डको चाओ प्राया नदीको पुलमा ठोक्किएर आइतबार भएको डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु भएकामध्ये मङ्गलबारसम्ममा २७ जनाको शव भेटिएको छ । दुर्घटनामा परी हराइरहेका अरु दुई जना अझै नभेटिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । स्थानीय थाई अधिकारीले भेटिएका शवमध्ये छ ओटा शव आठ वर्षका बालकको रहेको जनाएका छन् । शव घटनास्थलदेखि पाँच किलोमिटर टाढा भेटिएका हुन् । अझैसम्...
पूर्वी भारतमा बस पोखरीमा खस्दा दशको मृत्यु, बीस ‘वेपत्ता’
नयाँ दिल्ली (भारत),४ असोज । भारतीय पूर्वी राज्य विहारमा करिब ६५ जना यात्रारत एक बस पोखरीमा खस्दा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने २० जना अन्य पोखरीमा डुबेर बेपत्ता भएको आशङ्का रहेको यहाँका उच्चप्रहरी अधिकारीले सोमबार बताएका छन् ।विहारको म को प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले स्थानीयको सहयोगमा १० जनाको शव पोखरीबाट बाहिर निकालेको छ भने अझै २० जना पोखरीभित्र रहेको हुनसक्ने बताइएको छ । विहार राज्यका मुख्य...
अमेरिकामा आठ सय बढी आप्रवासीलाई भूलबस नागरिकता
वासिङ्टन (अमेरिका), ४ असोज । अमेरिकी प्रशासनले कम्तिमा ८५८ जना विदेशीलाई ‘भूलबस’ नागरिकता प्रदान गरिन पुगेको सोमबार अमेरिकी होमल्यान्ड सेकुरिटी परीक्षणले बताएकोे छ । यसरी अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने केही विदेशीमा सम्बन्धित देशबाट सुरक्षाका कारण वा छलकपट गरी आप्रवासी शरणार्थीको रुपमा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका मानिसहरुसमेत परेको बताइएको छ । यसरी अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशीहरुको...
रसियाली संसदमा राष्ट्रपति पुटिनको दल बहुमतमा
मस्को (रसिया), ३ असोज । रसियाको सत्ताधारी दल युनाइटेड रसिया पार्टीले (यूआरपी) संसदीय निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सफल भएको छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि उहाँलाई चौँथो कार्यकालका लागि रसियाको नेतृत्व सम्हाल्न चाहेमा मार्ग प्रशस्त भएको छ । राष्ट्रपति पुटिनको कार्यकाल सन् २०१८ मा अन्त्य हुँदैछ । सोमबारसम्म घोषणा भएको ९८.३ प्रतिशत मत परिणाममध्ये पुटिनको युनाइटेड र...
थाइल्यान्डमा डुङ्गा दुर्घटनामा बेपत्ताको खोजी जारी
आयुत्थाया (थाइल्यान्ड), ३ असोज । थाइल्यान्डमा मुस्लिम तीर्थयात्रीलाई बोकेर गएको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको सोमबार पनि खोजीकार्य जारी रहेको छ । थाइल्यान्डको चाओ प्राया नदीको पुलमा ठोक्किएर आइतबार भएको डुङ्गा दुर्घटनामा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । प्राचीन सहर आयुत्थाया नजिकै भएको दुर्घटनामा १३ जना मृत्यु हुनुको साथै अन्य ३३ जना घाइते भएको पुष्टि विपद् नियन्त्रण प्रमुख...
अस्ट्रेलियाको गालाप्यागोस कछुवाको ५० औँं जन्मदिवस मनाइयो
सिड्नी (अस्ट्रेलिया), ३ असोज । अस्ट्रेलियाको पर्थ महानगरमा अवस्थित पर्थ चिडियाखानामा राखिएको ग्यालाप्यागोस जातको सेर्रो नामको एउटा भीमकाय कछुवाको ५० औं जन्मदिवस धुमधामका साथ मनाइयो । उक्त भाले कछुवा ४९ वर्ष पूरा गरी आजका दिन ५० औंँ वर्षमा प्रवेश गरेको चिडियाखानाकी प्रमुख इमिली ट्रेनरले बताइन् । जन्मदिवस समारोहमा उक्त कछुवालाई अत्यन्त मनपर्ने सुन्तला, फर्सी, मेवा, किबि, भूइँऐँसेलु (स्ट्रबेर्री),...
Previous 1 … 461 462 463 … 516 Next
-17605 second ago
-15493 second ago
-8522 second ago
-6926 second ago